दुई रुपैयाँ नपाउने विमलाको मासिक कमाइ पचास हजार ! - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
दुई रुपैयाँ नपाउने विमलाको मासिक कमाइ पचास हजार !
२७ कात्तिक, सुरुङ्गा, झापा। “घर छेउको पसलेले जतिबेला मलाई दुई रुपैयाँका लागि पनि पत्याउँदैनथे, आयस्रोत नभएका कारण तिर्न सक्दिन भनेर पसलेले मलाई ऋण दिनै मान्दैनथे”, विगत सम्झँदै मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका– ८ की ४३ वर्षीया विमला भण्डारीले भनिन्, “कामले काम सिकाउँदोरहेछ, अहिले म मासिक रु ५० हजार कमाउन सक्ने भएकी छु ।”
व्यापार व्यवसाय शुरु गर्दाका दिनमा स–साना काममा पनि अल्छी नमानी लाग्ने विमला अहिलेसम्म आइपुग्दा कुखुरापालन र कुखुरको मासु बिक्री गर्ने काममा तल्लिन छिन् । उन अहिले मनग्य आम्दानी आर्जन गरिरहेकी छिन् ।
“गाउँमा मलाई दुई रुपैयाँका लागि समेत नपत्याउने अवस्था थियो, आज मलाई यहाँँसम्म ल्याइपुर्याउन सहाराको ठूलो हात छ,” उनले भनिन्। मेहनती महिलाका रुपमा परिचित विमलाले अहिले घरैमा कुखुरा फार्म खोल्नुका साथै फ्रेस हाउस समेत खोलेकी छिन् । विदेश पठाएका श्रीमान्लाई पैसा कमाउनु त कता हो कता उल्टै ऋण खोजेर नेपाल फर्काउनुपर्यो ।
“भोकभोकै कैयौँ रात सुतेकी छु, तै पनि मैले हरेस खाइनँ, काममा लागिरहें”, उनले भनिन् , “पहिलोपटक सहारा नेपाल साकोसले सञ्चालन गरेको लघुवित्त कार्यक्रममा सहभागी भएर समूहमा आबद्ध भएपछि रु पाँच हजार कर्जा लिई जुत्ता चप्पल व्यापार शुरु गरे ।” जुत्ता चप्पल बेच्न उनी साइकलमा पोका बोकेर बयरवन, रमाइलोलगायत बजारसम्म पुग्थिन ।
मासिक रु ५० हजारभन्दा बढी कमाइ गर्न थालेपछि अहिले उनको जीवनशैली फेरिएको छ । उनको व्यापार पथरी शनिश्चरेमा मात्र सीमित छैन । इटहरीसम्म फैलिएको छ । “अहिले आफूलाई मात्र होइन अरुलाई पनि आत्मनिर्भर गराउन सक्ने अवस्थामा छु,” उनले भनिन् ।
विमलालाई काममा श्रीमान्ले सघाउछन् । उनीसँग एउटा मारुती भ्यान छ । जसको माध्यमबाट श्रीमान् महेश भण्डारीले कुखुरा बिक्रीका लागि इटहरीसम्म लैजान्छन् ।
फूलबारी सहारा महिला समूह नं ५८ की सदस्य विमला कुनै बेला त्यही समूहकी अध्यक्ष थिईन्। त्यहीबेला उनले नै प्रवद्र्धन गरेका समूह अहिले सो क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । यही बीचमा उनले दुई कट्ठा जमिन जोडेकी छिन् । ठूली छोरीको बिहे गर्न खर्च जुटाइन्। अरु दुई छोरी र एउटा छोरो राम्रै स्कूलमा पढाइरहेकी छिन्।
“यही मेहनत र परिश्रम देखेर सहकारी क्षेत्रकै ठूलो पुरस्कार हामीले विमलालाई प्रदान गरेका हौँ” सहारा नेपाल साकोसका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रकुमार गिरीले भनिन् । विमलाले आफूसँगै अरुलाई पनि स्वावलम्बी बनाउन खेलेको योगदानको कदर गर्दै उनलाई यसवर्ष ‘प्रो मोहमद युनुस सहारा पुुुरस्कार’ प्रदान गरिएको हो । रु ५० हजार सहकारी क्षेत्रकै ठूलो धन राशिको पुरस्कार हो । उनई शनिबार सो पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको थियो । रासस
Previousउम्मेदवार र नगरप्रमुखको घरजग्गा विप्लवको कब्जामा
Nextचुनावलाई ठगहरुको मेस बनाउनु हुँदैन: बिजुक्छे